Shiinaha ayaa iibiya bakhaar weyn oo bir culus leh oo leh warshad warshadeedka mezzanine iyo soosaarayaasha | EBIL
Dukaan kulul oo lagu iibiyo dusha sare ee maadada birta mezzanine
Dulmarka Tafaasiisha Degdega ah Meesha asalka: Jiangsu, Shiinaha, Jiangsu, Shiinaha (Mainland) Magaca Nooca: EBILMETAL Model Number: EBIL-GLHJ, EBIL-GLHJ Nooca: Noocyo badan, MULT-LAYER Maaddada: Feature steel: Feature steel: Adeegga Ilaalinta Burburka: Warehouse Shahaadada Rack: Cabbirka CE: Qiyaasta Codsiga Awooda Miisaanka: 500 ~ 1000kgs mitir murabac ah Balac ahaan: sida codsi Midho: sida midabka codsi: Buluug, Orange, Cagaaran, iwm
Jiangsu, Shiinaha, Jiangsu, Shiinaha (Mainland)
Heerar kala duwan, MULT-LAYER
500 ~ 1000kgs halkii mitir murabac
Buluug, oranji, cagaar, iwm
Daahan budada, Galvanized
Waajibaadka Dhex-dhexaadka ah
Qalabka Birta Rakarka Dabaqa
1. Ku habboon dhawritaanka iyo hagaajinta alaabada dheer iyo cufan. 2. Rakibaad fudud iyo qalab dhammaystiran. 3. Waxaa loogu talagalay ku shaqeynta fargeetooyinka.1. Awoodda loodhadhka shelf wuxuu ku dhici karaa 2.5t ilaa 6t hal dhinac, iyo 5t ilaa 12t labada dhinacba2. ugu badnaan ka faa iideysiga booskaaga 3. Isu ururi oo iskudarista si fudud oo ku habboon, si markaa dib loogula noqon karo4. Qiimo jaban oo leh tayo sare iyo xoog xoog struture5. midabbo kala duwan oo aad dooratid, iyo budo ku buufin daaweynta dusha sare
Mezzanine-ka EBILTECH ee balaaran ee ka kooban qaybaha tayada sare leh waxay abuuraan meelo lagu keydiyo oo dheeraad ah, qolal beddelasho, xafiisyo, iyo waxyaabo aad u badan oo horeba u jiray ama u rakibnaa qalab cusub. Qalabka lagu dhejiyo sida jaranjarada, wiishashka gacanta, wiishashka toosan, albaabada, iyo baqashada amniga ayaa wanaajinaya amniga waxayna fududeeyaan qulqulka alaabada hal dabaq oo kale. Cabbiryadeena baaxadda weyn, noocyada dabaqa, iyo nidaamyada wax dhista waxay macnaheedu yihiin in mezzanine-ku ay la jaan qaadayaan baahiyahaaga ganacsi ee gaarka ah.
1.Q: Ma tahay qaybiyaha ama soo-saare? A: Waxaan nahay xirfadle oo hogaamiya soo saare ku dhawaad ​​20 sanadood. Waxaan soo saarnaa oo aan u dhoofinaa boorsooyin tayo sare leh oo tayo sare leh, Nidaamka boogaha ee kaladuwan iyo Rodio gaari-wadida, ASRS oo sumcad ku leh macaamiisheena. Awooddayada wax-soo-saarka anteenadu waa 100,000 tan oo ka kooban meerisyo iyo 1,000 cutub oo baabuurta xawaaraha ah. 2.Q: Maxaa adiga kaga duwan kuwa kale? A: 1) Waxaan leenahay in kabadan 40 injineerro farsamo, koronto iyo softiweer. EBILTECH had iyo jeer waxay muhiimad weyn siisaa hal abuurka wax soo saarka iyo R&D. Kaliya ma laha kooxdeeda cilmi baarista iyo horumarinta, laakiin waxay sidoo kale iskaashi la sameysaa machadyada cilmi-baarista ee sida weyn loo yaqaan, si ay si joogto ah ugu xoojiso awoodda farsamada ee shirkaddan. Baadhitaanka madax-bannaan iyo horumarinta nidaamka WMS iyo nidaamka WCS. Waxaan haysannaa wax ka badan 60 patentiyo qaran. 2) Adeeggeenna Heersare ah Si dhakhso ah, xigasho aan dhib lahayn oo keliya noo soo dir email Waxaan ballan qaadaynaa inaanu kaga jawaab celino qiime 24 saac gudahood - mararka qaarkood xitaa saacadda gudaheeda. Haddii aad talo u baahan tahay, kaliya ka wac xafiiskayaga dhoofinta taleefanka 0086-25-52757208, si dhakhso leh ayaan uga jawaabnaa su'aalahaaga. 3) Waqtigayaga soosaarka degdega ah Amarada caadiga ah, waxaan balan qaadi doonaa inaan soo saarno 20-30 maalmood gudahood. Hadaf ahaan, waxaan cadeyn karnaa waqtiga gaarsiinta sida ku xusan heshiiska rasmiga ah. 3.Q: Waa maxay adeegyada rakibaadda iyo dejinta? A: Waxaan haynaa kooxo rakibo oo khibrad hodan ah u leh dibadaha. Gawaarida xamuulka raadiyaha, waxaan u diri doonnaa injineero goobta si aad wax udheegto iyo tababarka. Nidaamyada isqarxinta, waxaan ku rakibi karnaa kooxdeena ama u magacaabi karnaa injineero hagida howlgalka. Waxaan ka fulinay mashruuc badan southease Aasiya, Mareykanka, Yurub. 4. S: Muxuu MOQ-du amri karaa? A: Caadi ahaan waa weel dhan 20ft, laakiin tiro badan ayaa ku timaadda qiimo wanaagsan 5.Q: Waa maxay lacag bixinta? A: T / T ama LC
Hore: Dhisidda nidaam tayo leh oo heer sare ah oo heer sare ah oo bir-macaan leh
Xiga: Qaab dhismeedka Birta Tooska ah ee Warshadaha Garret shelving Platform Floor Rakhshka
Xarig , Xidhitaanka lakabyo Badan , Suuqa Suuqa , Wadada Shanaad , Asal aamisan , Qalabka Birta ,